हाइपर फण्ड डुबेको हल्ला चल्दै, खासमा भएको के हो? जानौं – Eps Sathi
December 1, 2021 5325
बेलायत, पोर्चुगल, दक्षिण कोरियादेखि नेपाली कामदारको ठूलो संख्या रहेको खाडीका देश र मलेसियामा रहेका नेपाली यस्ता मिटिङमा सहभागी भएको देखिन्छ । नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार र नेपालभित्रबाट अनुमति नलिई डलरमा लगानी गर्नु गै’रका’नुनी काम हो। विगतमा पनि ने’टवर्कि’ङ शैलीमा यस्ता कारोबार भएका थिए । स्वदेश वा विदेशमा हुने त्यस्ता कारोबार अ’वै’ध हुन्। डलर देशका लागि भ्यालुएबल कुरा हो । कसैले डलर विदेश पठाएको मात्रै थाहा भयो भने पनि कारबाही हुने राष्ट्र बैंक श्रोत बताउँदछ।
Prevकोरियनहरुको औषत आयु ८० बर्षभन्दा माथि, आखिर किन धेरै बाँच्छन कोरियन?
Nextकोरियाका चर्चित नायिकाहरुले कति कमाउँछन त? थाहा पाउँदा सबै पर्छन च’कित